Abenzi be-Attenuator & Suppliers | I-China Attenuator Factory
ST Fixed Owesifazane Owesilisa Fibre Umthambo Attenuator
Ama-attenuator we-optical asetshenzisiwe asetshenziselwa izixhumanisi ze-fiber optic ukunciphisa amandla we-optical ezingeni elithile. I-fiber optic attenuator ejwayele ukusetshenziswa yizinhlobo zesifazane eziya kowesilisa, ezibizwa nangokuthi i-plug fiber attenuator. Zinama-ferrules e-ceramic futhi kunezinhlobo ezahlukahlukene zokulingana izinhlobo ezahlukene zezixhumi ze-fiber optic. Inani eligxilisiwe le-fiber optic attenuator linganciphisa amandla we-optical ezingeni elinqunyiwe, i-Variable fiber optic attenuator inebanga lokuncishiswa okuguqukayo. Izici ♦ Wide ...
SC Fixed Attenuator Optical
I-MU Fixed Fibre Optical Attenuator Owesilisa kuya kowesifazane
Ama-attenuator we-optical asetshenzisiwe asetshenziselwa izixhumanisi ze-fiber optic ukunciphisa amandla we-optical ezingeni elithile. I-fiber optic attenuator ejwayele ukusetshenziswa yizinhlobo zesifazane eziya kowesilisa, ezibizwa nangokuthi i-plug fiber attenuator. Zinama-ferrules e-ceramic futhi kunezinhlobo ezahlukahlukene zokulingana izinhlobo ezahlukene zezixhumi ze-fiber optic. Inani eligxilisiwe le-fiber optic attenuator linganciphisa amandla we-optical ezingeni elinqunyiwe, i-Variable fiber optic attenuator inebanga lokuncishiswa okuguqukayo. Izici Wide at ...
LC Fixed Fibre Optical Attenuator Owesilisa kuye Owesifazane
I-Inline Variable Optten Attenuator
I-in-line variable optical attenuator (VOA) ihlelwa ngesandla, isetshenziselwe ukulinganisa ngokunembile amandla esiginali kuma-fiber circuits, noma ibhalansi isignali ebonakalayo lapho ihlola ububanzi obunamandla besistimu yokulinganisa. Izici fiber I-fiber ion doped fiber d Ukuqina komthombo wamandla aphezulu independence Ukuzimela kwe-Wavelength levels Amazinga okuncipha asukela ku-1dB kuye ku-25dB ♦ 1310nm, 1550nm kanye no-1310 / 1550nm ubude begagasi ezimbili Izicelo, i-Erbium Doped Fiber Amplifiers (EDFA), Dense Wave Division M. ..
Isithambisi sokuguquguqula se-Optical, uhlobo lwe-adaptha, i-0 ~ 30 dB ukunciphisa, i-1310 ne-1550nm, iwindi elikabili, i-FC / PC. APPLICATION Telecommunication Networks EDFA CATV Networks Active device termination Instrumentation Instrumentation EZIPHUMA Uhla olubanzi lokuncishiswa kwemvelo Precision ferrule ceramic ferrule Isakhiwo Esilula Esinokwethenjelwa IZINCAZELO Izimo Zezinto Amanani Amanani Hlunga Igebe Lomoya Lokuncishiswa kwebanga 0 ~ 50dB 0 ~ 28dB Resolution 0 ....
I-FC Fixed Optical Attenuator
Ama-attenuator we-optical asetshenzisiwe asetshenziselwa izixhumanisi ze-fiber optic ukunciphisa amandla we-optical ezingeni elithile. I-fiber optic attenuator ejwayele ukusetshenziswa yizinhlobo zesifazane eziya kowesilisa, ezibizwa nangokuthi i-plug fiber attenuator. Zinama-ferrules e-ceramic futhi kunezinhlobo ezahlukahlukene zokulingana izinhlobo ezahlukene zezixhumi ze-fiber optic. Inani eligxilisiwe le-fiber optic attenuator linganciphisa amandla we-optical ezingeni elinqunyiwe, i-Variable fiber optic attenuator inebanga lokuncishiswa okuguqukayo. Izici ...